Akụkọ Ann Smarty na Martech Zone |
Edemede site na Ann Smarty
Ann Smarty bụ ika na onye njikwa obodo na Internet Marketing Ninjas na onye guzobere Viral ọdịnaya Bee. Ọrụ njikarịcha search engine nke Ann malitere na 2010. Ọ bụbu onye nchịkọta akụkọ-na-isi nke Search Engine Journal na onye nyere aka na nchọta a ma ama na blọọgụ mmekọrịta, gụnyere Small Business Trends na Mashable.
Ị na-eme ahịa ahịa Instagram adịghị mma? Lekwasị anya na eziokwu!
Dabere na netwọkụ ahụ n'onwe ya, Instagram nwere ihe karịrị ijeri 1 ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike ugbu a, na ọnụ ọgụgụ ahụ ga-anọgide na-eto eto. Ihe karịrị 71% nke ndị America dị afọ 18 ruo 29 na-eji Instagram na 2021. Maka afọ 30 ruo 49, 48% nke ndị America na-eji Instagram. Na mkpokọta, ihe karịrị 40% nke ndị America na-ekwu na ha na-eji Instagram. Nke ahụ bụ nnukwu: Pew Research, Social Media Jiri na 2021 Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ